1 VaKorinde 5 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Tsamba Yekutanga kuvaKorinde 5:1-13
Nyaya yeupombwe (1-5)
Mbiriso shomanana inovirisa mukanyiwa wese (6-8)
Munhu akaipa anofanira kubviswa (9-13)
5 Zviri kutonzi pakati penyu pari kuitwa upombwe,*+ uye upombwe* hwakadaro hautombowanikwi kunyange pakati pemamwe marudzi, hwekuti mumwe murume ari kugara nemudzimai wababa vake.+ 2 Muri kutodada nazvo here? Maisafanira kuchema here,+ kuti murume akaita zvakadai abviswe pakati penyu?+ 3 Kunyange zvazvo ndisiko panyama, ndiriko mumweya, uye ndatotonga murume wacho akaita izvi, sekunge kuti ndinotova nemi. 4 Kana makaungana pamwe chete muzita raShe wedu Jesu, uye muchiziva kuti ndinemi mumweya pamwe nesimba raShe wedu Jesu, 5 munofanira kuisa munhu akadaro kuna Satani+ kuti nyama iparadzwe, maonero eungano azochengetedzwa* pazuva raShe.+ 6 Kuzvirumbidza kwamuri kuita hakuna kunaka. Hamuzivi here kuti mbiriso shomanana inovirisa mukanyiwa wese?+ 7 Bvisai mbiriso yekare, kuti muve mukanyiwa mutsva, sezvo imi muri vanhu vasina kuviriswa. Nekuti Kristu, gwayana redu rePaseka,+ akabayirwa.+ 8 Saka ngatichengete mutambo,+ kwete nembiriso yekare, kana nembiriso yeuipi nechivi, asi nechingwa chisina mbiriso chekutendeka nechokwadi. 9 Mutsamba yangu ndakakunyorerai kuti murege kufambidzana nemhombwe,* 10 ndisingarevi kuti murege zvachose kufambidzana nemhombwe* dziri munyika ino+ kana vanhu vanokara kana makororo kana vanonamata zvidhori. Dai zvakadaro maitozofanira kubva panyika.+ 11 Asi iye zvino ndiri kukunyorerai kuti murege kufambidzana+ nemunhu wese anonzi hama iye ari mhombwe* kana munhu anokara+ kana anonamata zvidhori kana anotuka kana chidhakwa+ kana gororo.+ Murege kunyange kudya nemunhu akadaro. 12 Nekuti ndinei nekutonga vari kunze? Imi hamutongi vari mukati here, 13 Mwari achitonga vari kunze?+ “Bvisai munhu akaipa pakati penyu.”+
^ ChiGir., “mweya uponeswe.” Ona Tsanangudzo Yemashoko pana “Mweya.”